အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ အပတ်စဉ် အင်္ဂါနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Eileen’s Corner ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက် ကျွန်တော်တို့ မျှဝေပေးချင်တာက တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အပြန်အလှန်လေးစားမှု ဘာကြောင့်လိုအပ်လဲ? ဘာလို့အရေးကြီးလဲ? ဆိုတဲ့ အကြောင်း Eileen ရေးထားတာလေးကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းမှာဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ မိသားစုမှာဖြစ်ဖြစ် အပြန်အလှန်လေးစားမှုက ဘယ်လိုအရေးပါတဲ့အကြောင်းကိုတော့ အောက်မှာဖတ်ကြည့်လိုက်နော်…
ကျွန်မကို အောင်မြင်တဲ့ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်အောင် အဖွဲ့သားတွေအချင်းချင်း ဘယ်လိုစည်းလုံးမှုတွေ၊ အခြေခံအုတ်မြစ်တွေတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာမျိုးတွေ မကြာခဏမေးလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာလေးထဲမှာတော့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် Professional ကျအောင်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲ၊ အခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ၊ အသင်းအဖွဲ့အလိုက် အောင်မြင်မှုတွေရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ Mutual Respect ဆိုတဲ့ အပြန်အလှန်လေးစားမှုတွေဘယ်လိုထားရမလဲ စတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို ဝေမျှပေးထားပါတယ်။
ကျောင်းသားတစ်ယောက်က ကျွန်မကိုမေးလာပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်အောင် အဖွဲ့သားတွေအချင်းချင်း ဘယ်လိုစည်းလုံးမှုတွေ အခြေခံအုတ်မြစ်တွေတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုပေါ့။ ကျွန်မရဲ့အမြင်ကိုပြောရရင်တော့ အလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိသားစုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး လေးစားမှုဟာအရမ်း အရေးပါတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလူဟာ ကိုယ်နဲ့၃နှစ်ကြာ သူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်နိုင်တယ်၊ ကိုယ်နဲ့ပေါတောတော စလိုက်နောက်လိုက် လုပ်လေ့ရှိတဲ့လူ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ကိုယ့်ထက်အများကြီးငယ်တဲ့လူဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်ဆိုတာနဲ့ အဲ့ဒီအရာတွေကို ခဏဘေးဖယ်ထားပြီး တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဆက်ဆံပြောဆိုတဲ့အခါမှာ အချင်းချင်းလေးစားမှုလေးနဲ့ ဆက်ဆံဖို့လိုပါတယ်။ အလုပ်ကအလုပ်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးက ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သက်သက်ပါ။ ရှင်းပါတယ်။ ကျွန်မအလုပ်မှာ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ဆိုင်တဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတွေမကြာခဏဆိုသလိုတွေ့ရပါတယ်။ ဥပမာ…အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာ တစ်ယောက်က အားတက်သရော နဲ့လေးနက်စွာဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာ အဖွဲ့ထဲက တစ်ယောက်က ကောင်းကောင်းနားမထောင်ဘဲ ကလေးတွေလိုမျိုးလျှောက်နောက်နေတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် သူတို့ရဲ့အလုပ်၊တာဝန်သာ အရေးအကြီးဆုံးလို့မှတ်ယူပြီး သူတို့ပြောချင်တာကိုသာရှေ့တန်းတင်ပြောပြီး တခြားလူပြောတာတွေကိုနားမထောင်တာမျိုးပေါ့။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဟာ အဖွဲ့တစ်ခုလုံးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပျက်ပြားစေပြီး အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုလုံးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုသာမကပဲ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ တိုးတက်မှုကိုပါ နှောင့်နှေးစေပါတယ်။
ကျွန်မက ဆရာမကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မမှာ ဘဝကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာတွေ၊အတွေ့အကြုံတွေ၊ ခက်ခဲမှုတွေကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ဖြတ်သန်းကျော်လွှားခဲ့ပါတယ်။ (နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆိုလို့ ကျွန်မက အသက်ကြီးနေပြီလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်! နှစ်ပေါင်းများစွာဖြတ်သန်းပြီးတာတောင်မှ ကျွန်မကအရမ်းငယ်သေးတယ်လေ 😝😝😝LOLOLOL) ကျွန်မရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအရပြောရရင်တော့ အခြေခံအုတ်မြစ်ကောင်းကောင်းနဲ့ စည်းလုံးညီညွှတ်ပြီး အောင်မြင်တဲ့ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ချင်ရင်တော့ အဖွဲ့ဝင်တိုင်းဟာ…
၁။ ပထမကတော့ professional ဆန်တဲ့အပြုအမှုဆိုတာဘာလဲဆိုတာကို နားလည်ရမယ်။ ဒုတိယကတော့ သူတို့ professionalism ဆိုတာကို ကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ပြီးရင် professional တစ်ယောက်လိုပြုမူလာလိမ့်မယ်( တကယ်ပါ… အလုပ်မှာ ကျွန်မကလေးတစ်ယောက်လို ဝုန်းတိုင်းကြဲပြီးလုပ်ချင်ရာလုပ်သွားချင်စိတ်က ခဏခဏပေါ်ချက်ပဲ! ဒါပေမဲ့ကျွန်မ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး…ဒါဟာ professional တစ်ယောက်လိုမျိုးပြုမူတာပါ၊ ကျွန်မရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာတော့ သောင်းကြမ်းပစ်ခဲ့တာပေါ့)
၂။ ကောင်းမွန်စွာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ပြောဆိုဆက်ဆံပါ။ ကျွန်မရဲ့တစ်ကိုယ်ထဲအမြင်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူတွေက ပြောဆိုဆက်သွယ်တဲ့အချိန်မှာ ရှင်းလင်းပြတ်သားတိကျမှုမရှိလို့ပါ။ အသေးစိတ်ကိုထည့်မပြောကြဘူးလေ။ အရာရာကို သေချာရှင်းလင်းအောင်မလုပ်… သေချာအောင်မလုပ်ကြဘူးလေ။ ယူဆချက်တွေများစွာနဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်ကြတယ်။ တစ်ဖက်မှာတော့ ဆက်သွယ်ပြောဆိုရာမှာအရမ်းအပြောလွန်ပြီး တစ်ခြားလူကိုရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်စေတတ်တယ်။ အဖွဲ့သားတွေအကုန် တစ်နေရာတည်း ရောက်နေစေချင်ရင်တော့ ဒီပြောဆိုဆက်သွယ်မှုဆိုတဲ့ communication ကိုလေ့လာသင်ယူတတ်မြောက်ရမှာကတော့ အဓိကပါပဲ။
၃။ ကျွန်မ SoyAi ဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းစစချင်းတုန်းက ပြဿနာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့က အချင်းချင်းလုံးဝကို ပြောဆိုဆက်သွယ်မှု မလုပ်ကြဘူး၊ အချင်းချင်းသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တော့ ပြောဖို့ဆိုဖို့အားနာကြတယ်လေ… ဒီတိုင်းဘာမှမပြောဘဲနေကြတယ်။ အဲ့တော့အဖွဲ့က ရင်းနှီးမှုတွေလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့။ တကယ်တမ်းပြောရင် သူတို့အတူတူနေခဲ့တာတောင်မှ စိတ်ချင်းကတော့ အဝေးကြီးဆိုသလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အသင်းအဖွဲ့ team ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲ? “You start asateam, you die asateam.” အသင်းအဖွဲ့အနေနဲ့စခဲ့ရင် အသင်းအဖွဲ့အနေနဲ့ပဲ ကုန်ဆုံးရမယ်တဲ့။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး လေးစားမှု၊ ကောင်းမွန်ပွင့်လင်းစွာပြောဆိုဆက်ဆံမှု နဲ့မျှဝေမှုတွေဟာ အသင်းအဖွဲ့တိုင်းရဲ့ တိုးတက်ကြီးထွားမှု အခြေခံအုတ်မြစ်တွေကို တည်ဆောက်ဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာတွေပါပဲ။ There is no “I” in TEAM.
အသင်းအဖွဲ့မှာ “I” (ငါ) ဆိုတဲ့ စကားလုံးမရှိပါဘူး။ အဖွဲ့လိုက် (We) ဆိုတာပဲရှိပါတယ်။ အဖွဲ့လိုက် တိုးတက်ကြီးထွားတယ်… အဖွဲ့လိုက်အောင်မြင်မှုတွေရယူတယ်…အဖွဲ့လိုက် ရင့်ကျက်တယ်… ကျွန်မတို့ရဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေမှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အပြန်အလှန်လေးစားမှု ဓလေ့ကို လိုက်နာကျင့်သုံးသင့်ပါတယ်။ အဖွဲ့မှာတင် မဟုတ်ပါဘူး… ကျွန်မတို့နေ့စဉ်ပြုမူနေထိုင်မှုတိုင်းမှာပါ ကျင့်သုံးသင့်ပါတယ်။
ဒါကတော့ Eileen မျှဝေပေးသွားတဲ့ အပြန်အလှန် လေးစားမှုအကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့ရော ဘယ်လိုမျိုး တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အပြန်အလှန်လေးစားမှုထားကြလဲဆိုတာ အတွေ့အကြုံလေးတွေရှိရင် မျှဝေခဲ့ကြဦးနော်…
By:Igbekele Olaoluwa 16/10/2019
“လူငယ်တစ်ယောက်နဲ့ရွေးချယ်မှု” In: Inspiration/Aspiration/Motivation, Kawi Inspires